China Bhora Mill vagadziri uye vanotengesa | Mets
Iyo chigayo chebhora chine chikamu chekudyisa, chikamu chekudyisa, chikamu chinotenderera, chikamu chekutapurirana (chinodzora, diki rekufambisa giya, mota, magetsi emagetsi) zvichingodaro. Iyo mhango shaft inogadzirwa nesimbi yakakandwa, iyo lining inogona kuchinjwa, uye iyo rotary giya inogadzirwa nemazino anotenderera eanokanda. Iyo dhiramu ine yekupfeka-inodzivirira lining board, iyo ine yakanaka yekupfeka kuramba. Muchina unogadzikana uye wakavimbika.Ball mill host inosanganisira silinda, cylinder muviri neinobatsira lining yakagadzirwa neshangu inodzivirira zvinhu, iine uye chengetedza yayo inotenderera humburumbira inotakura inobereka, yakaendesa chikamu, senge mota, uye dhiraivha giya, pulley, katatu, etc.
Nezve inonzi blade zvikamu, kazhinji hazvisi zvinhu zvikuru, zvinoriumba pane feed end inlet ine yemukati sikuruwa iyo inonatsa blade, inogona kutaurwa pane zvinoerera magumo zvikamu zvinoburitsa muromo nemukati sikuruu zvinogona kuzvidaidza kuti zononoka chipande.
Uye zvakare, mumidziyo yekubatsira yekudonhedza kupera, kana iyo yekufambisa yekufambisa ikashandiswa, pachave nezvikamu zvinonzi zononoka mashizha mumidziyo, asi kunyatsotaura, haisi chikamu cheiyo bhora chigayo. Dry bhora chigayo uye yakanyorova chendarira bhora chigayo chinogona kusarudzwa zvinoenderana nezvinhu uye dhizaini modhi. Energy yekuchengetedza bhora chigayo, iyo otomatiki yekumisikidza miviri mutsara centripetal idenderedzwa roller inobereka, iyo inomhanya kuramba idiki, iyo yekuchengetedza simba mhedzisiro inoshamisa. Chikamu chemuviri wedhiramu chepombi yekutanga chakawedzerwa koni cylinder, iyo inowedzera huwandu hunoshanda hweguyo uye inoita kuti kugoverwa kwepakati muhubhu kunzwisisike. Ichi chigadzirwa chinoshandiswa zvakanyanya mune isina-ferrous simbi, simbi inosimbi, isiri-simbi kubhenefera munda, kemikari indasitiri uye indasitiri yezvivakwa.
Ball chigayo kugadzwa:
A) chirongwa chekumisikidza chakagadzirwa zvinoenderana neinjiniya yemushandisi uye inofanirwa kuiswa munzira, nzvimbo nenzvimbo yedhiragi;
B) iyo yepasi ndege yeiyo fuselage inofanirwa kuve yakasimba, uye kumeso kwendege yepasi yeyesilinda haina kukura kupfuura 1.5 / 1000 mushure meiyo yakatwasuka kugadzirisa.
A) bvisa izvo zvinhu kubva pasi pechigadziko chemidziyo yekuisa, kunyanya madziro emukati egomba haafanire kuve neguruva, mafuta, mvura nezvimwe zvinwiwa;
B) mushure mekuburitsa maketi ekupakata, mainjini ichaendeswa kunzvimbo yekumisikidza nenzvimbo dzakakodzera kusimudza (crane / forklift);
C) isa midziyo panzvimbo, anchor bhaudhi inokwira maburi, uye "tsoka dzekurarama" dzebhandi rakasarudzika dzinosungirirwa kuchassis yefuremu mushure mekusunganidzwa pachassis yefuremu, ipapo grouting yechipiri inogona kuitwa;
D) mushure mekumisikidzwa kwemaawa makumi maviri nemasere esimba resenti, inogona kushandiswa kusimbisa nati kurodha bvunzo muchina;
E) kuwana simba;
F) kuiswa kwekumisikidza uye kururamisa kusagadzikana;
G) makabati emagetsi akaiswa mukamuri yeinjini yekubatsira pasina chikonzero chekuisa pasi.
2. Kuedza kushanda:
Bhora chigayo kuisirwa kwapera, iyo yekuongorora, inogona kuve isina bvunzo bvunzo, kumisikidza bhora chigayo nehunyanzvi bhora chigayo varidzi vanofanirwa kuve nebasa, bhora chigayo uye zvakanyatso kutevedzera nekuchengetedza mashandiro maitiro.
(1) iyo yekumhanyisa nguva yekuita isina basa haifanire kunge ari pasi pe12-24 maawa, uye matambudziko ari mukushanda achagadziriswa munguva.
(2) kusashanda kwekumisikidza kune yakajairwa mutoro bvunzo kumhanya, kunogona kuitwa kana mutoro bvunzo uchimhanya mune ese matanho, mutoro oparesheni inofanirwa kuitwa zvinoenderana nemamiriro ekubuda mune yekudya, dzivisa zvisina kufanira kukuya bhora nesilinda liner uye kukuvara.
A) wedzera zvakafanira zvinhu uye 1/3 yemabhora esimbi (iwo huremu hwepamusoro hwechigayo chebhora) kuyedza kwemaawa gumi nemaviri kusvika makumi maviri nemana.
B) wedzera kusvika pa2 / 3 yeuwandu hwemabhora esimbi kumhanya kwemaawa makumi maviri nemana kusvika makumi mana.
C) zvinoenderana nemamiriro ebhora ekuyerera mamiriro, kugadzirwa kwezvinhu zvinogoneswa, zvinechekuita nemhando imwechete yebhora-chigayo muchina chaiwo wekutakura huwandu, sarudza bhora kurodha huwandu hweiyo bhora chigayo muchina, kweasingasviki maawa makumi manomwe nemaviri bvunzo yekumhanya.
(3) iko kuwedzera kwemutoro uri pamusoro uye kureba kwekuyedza nguva yekumisikidza kunoenderana nemamiriro ekumhanya kweiyo giya rehukuru uye yekudzora giya (tembiricha inokwira, ruzha, zino kumeso kusangana, nezvimwewo). Pamberi pekutaurirana kwakaringana kwemeso ezino asinga sangana nemagadzirirwo anodikanwa, haafanire kushanda zvizere.
(4) iyo inotonhora uye yekuzora sisitimu inofanirwa kushanda zvakajairika mukuyedza kushanda, uye tembiricha yekutakura kukuru, kufambisa kutakura uye yokuderedza inofanira kunge yakajairwa.
(5) mushure mekurodha 2/3 yesimbi bhora bvunzo kwemaawa makumi maviri nemasere kusvika makumi mana, tarisa uye sunga mabhaudhi ese zvakare.
(6) iyo yekuedza oparesheni inofanira kunyatso nyorwa.
Kusanganisa, kukuya, bhora chigayo chinonyanya kushandiswa kune zvedongo zvinhu chinhu chakakosha michina yekugadzirwa kwemhando dzakasiyana dze ceramic zvigadzirwa, muchina UNOSHANDISA kubatanidza kunetsekana, kuderedza kutanga kwazvino, chimiro chayo chakakamurwa kuita chakabatana uye chakazvimiririra. Iine v-bhandi dhiraivha, imwechete-padanho kana mbiri yekudzora, yakagadzirirwa ine yakazvimirira diki yemagetsi mota.
Zvadaro: Shaft ruoko